कन्हैया कुमारसँग नेपाल-वार्ता : 'राजनीतिमा नयाँ अनुहार आएको पुरानाले सहँदैनन्' - संवाद - नेपाल
चुनाव प्रचारका क्रममा बेगुसरायमा कन्हैया कुमार |तस्विर : सुरेशराज न्यौपाने
भारतमा जारी लोकसभा निर्वाचनमा बिहारको औद्योगिक नगरी बेगुसराय यसपटक विशेष चर्चामा छ । यसको प्रमुख कारण नयाँदिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु) को छात्र संघका पूर्वसभापति कन्हैया कुमारको उम्मेदवारी । ९ फेब्रुअरी २०१६ मा जेएनयुमा भएको एक कार्यक्रममा 'भारतविरोधी' नारा लगाएको आरोपमा राजद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका यिनै कन्हैया कुनै बेला बिहारको लेनिनग्रादका रुपमा समेत चिनिएको बेगुसराय लोकसभा क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै छन् । चुनावी प्रचारका क्रममा बेगुसरायमै रहेका कन्हैयासँग उनको राजनीति प्रवेश र उम्मेदवारी विषयमा नेपाल संवाददाता सुरेशराज न्यौपानेका प्रश्न :
चुनावी प्रचारमा सोचेभन्दा बढी समर्थन पाइरहेको छु । जनताको स्नेह अभूतपूर्व छ । यो एउटा पार्टीप्रतिको समर्थन होइन । बेगुसरायका जनता दलभन्दा माथि उठेर दिलसँग जोडिन पुगेका छन् । मैले यस किसिमको भावना देखेको छु, मतदातामा । यस्ता थुप्रै मानिस, जसलाई पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन, सरकारका नीतिसँगको असन्तुष्टिका कारण आफ्नो छोरा, भाइ ठानेर मेरो समर्थनमा अगाडि आएका छन् । आफूहरुको समस्या तथा मुद्दा उठाएर वकालत गर्छ भन्ने विश्वासका साथ मेरो पक्षमा उभिन पुगेका छन् ।
दलमा नलागी समाज र देश बदल्न सकिन्न भन्ने लागेर चुनावमा उठ्नुभएको ?
पानीमा डुबेकालाई बचाउन पानीमै हाम फाल्नुपर्छ । बाहिर बसेर बचाउँछु भनेर त्यो सम्भव छैन । डुब्न लागेकालाई साँच्चिकै बचाउन चाहने हो भने पानीमा हाम फाल्ने जोखिम लिनैपर्छ । राजनीति यो हदसम्म विकृत हुनुमा गतिला मान्छे यसबाट टाढा रहेकाले पनि हो । राजनीतिलाई उपयोग गर्ने मात्र हाबी भए । व्यक्तिगत र पारिवारिक लाभका लागि राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।
यसले आम मान्छेको राजनीतिप्रति चासो र रुचि घट्दै गएको छ । चुनाव हुन्छ/हुँदैन, भोट दिने/नदिने केही मतलब छैन । जब आम मानिसको सहभागिता कम हुँदै जान्छ, लोकतन्त्र स्वतः कमजोर हुन्छ । यसले हामीले परिकल्पना गरेजस्तो सहभागितामूलक लोकतन्त्र नभएर नाम मात्रको लोकतन्त्र बन्न पुग्छ । जुनसुकै पृष्ठभूमिको मानिस पनि चुनाव उठ्नेछ र जित्नेछ । त्यसप्रति जनतामा कुनै चासो रहने छैन । बिस्तारै लोकतन्त्रको जग कमजोर हुँदै जानेछ ।
पहिलेदेखि नै राजनीतिमा लाग्ने योजना रहेछ... ।
मेरो राजनीतिमा प्रवेश योजनाबद्ध होइन । मजस्तो पृष्ठभूमिको मानिसले राजनीतिमा आउँला भनेर सोचेको पनि हुँदैन । किनकि अहिले राजनीति भन्नासाथ ठूलो लगानीको कुरा आउँछ । यदि तपाईंसँग बन्दुक छ, पैसा छ भने मात्रै राजनीतिमा टिक्न सक्नुहुन्छ । अहिले राजनीतिमा लाग्न तन, मन, धन र गन सबै हुनैपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । तर यसलाई हेरेर मात्र बस्ने हो भने त बिस्तारै आम मानिसका लागि राजनीतिमा कुनै स्थानै रहने छैन । उनीहरु मतदातामै मात्र सीमित हुनेछन् । उनीहरुले अरुलाई जिताउन त सक्छन्, तर आफू भने कहिल्यै पनि जित्न सक्दैनन् । मेरो उद्देश्य भनेको राजनीतिमा यहीँनेर सन्तुलन ल्याउनु हो । मत दिन सक्छौँ भने हामी चुनाव पनि लड्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । तर राजनीतिमार्फत समाजमा रजाइँ गर्दै आएका पुराना खेलाडीले जहिल्यै त्यस्तो वातावरण बनोस् भन्ने चाहँदैनन् । उनीहरुलाई असह्य हुन्छ । अहिले सत्ताका विरोधीसमेत मेरो विपक्षमा उभिनुको कारण पनि त्यही हो । विरोधीले मेरो विरोध गर्नु त स्वाभाविकै हो । तर जसले मलाई साथ दिनुपथ्र्यो, उनीहरुसमेत विरोधमा उभिएको देख्दा दुःख लागेको छ । यसको कारणचाहिँ राजनीति मैदानमा कोही पनि नयाँ अनुहार नआओस् भन्ने हो ।
तपाईंको उम्मेदवारीले के फरक पार्छ ?
मेरो उम्मेदवारीले एक नजिर स्थापित गरेको छ । एउटा सामान्य परिवारको मान्छे, जसले पीएचडी गरेको छ, त्यसले पनि राजनीति गर्न सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ । मैले यहाँ कुनै ठूला कुराभन्दा पनि स्थानीय मुद्दालाई नै उठाएको छु । किन यहाँ विश्वविद्यालय छैन, किन यहाँ स्तरीय अस्पताल छैन ? सडकको खराब स्थिति किन छ ? स्वच्छ पानी अभाव कहिलेसम्म ? यस्ता स्थानीय मुद्दालाई नै मैले उठाएको छु । यदि म पढेर बेगुसराय आएको छु भने मेरो चिन्ता यहाँका मानिसको उपचार कसरी राम्रो होस्, उनीहरुको पढाइ कसरी राम्रो होस्, यहाँको व्यापार कसरी बढाउने, यहाँका किसानले कसरी आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउँछन् भन्ने नै हुनेछ । त्यसका लागि देशभित्र र बाहिरको सम्पर्कलाई म जन्मेको ठाउँका मानिसको समृद्धिमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने पनि सोच छ । यिनै कुरामा जिम्मेवारीबोध भएरै राजनीतिमा आएको हुँ ।
बिहारको राजनीति विकासका मुद्दाभन्दा जातीय समीकरणकै वरिपरि घुम्दै आएको छ । त्यसलाई कसरी तोड्नुहुन्छ ?
जातपात यहाँको मात्र यथार्थ होइन । यो कृत्रिम रुपमा बढाइचढाइ गरिएको हो । त्यसैले जातीय राजनीतिमाथि सजिलै जित हात पार्न सकिन्छ । विगतको कुरा गरौँ । बेगुसराय भन्नासाथ सीपीआईको गढ थियो । त्यतिबेला पनि जातपात त थियो । तर त्यसलाई सजिलै पाखा लगाइएको थियो । जनताले जातीय आँखाबाट हेर्न छाडिसकेका छन् ।
तपाईंको उम्मेदवारीले राजनीतिमा सुधार ल्याउला ?
हुन्छ/हुँदैन, थाहा छैन, तर प्रयास जारी राख्नुपर्छ । जीवनभर कम्तीमा एउटा जिल्लालाई नमुनाका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्नेचाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
तपाईंमाथि देशद्रोहको मुद्दा पनि चलिरहेको छ, होइन ?
यो कुनै मुद्दा नै होइन । वास्तविक मुद्दा ओझेल पार्न यसलाई नियोजित ढंगले चर्को बनाइएको हो । बेलायतीले भारतमा शासन गर्न 'डिभाइड एन्ड रुल' सूत्र प्रयोग गरेका थिए । अहिले भारतीय जनता पार्टीले पनि मूल मुद्दाबाट जनताको ध्यान मोड्न 'डाइभर्ट एन्ड रुल' चलाइरहेको छ । तर यसले काम गर्नेवाला छैन ।
चुनाव जिते त सकिइहाल्यो, हारियो भने ?
जित्नेमा म ढुक्क छु । तर हारे पनि अब राजनीतिमा त लागियो-लागियो ।